Usoro biogas sitere na nsị ezi na Argentina | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Usoro biogas sitere na nsị ezi na Argentina
Na obodo Hernando dị n'ógbè Córdoba malitere ịrụ ọrụ nke mbụ usoro biogas ọ bụghị naanị site na Argentina kama site na ndị ọzọ nke South America dabere na ezi nri.
Isdị usoro a adịlarịrị na Europe na United States, mana na mba ndị ọzọ ọ ka dị ọhụụ ma amachaghị ya.
N'ime ugbo ezì, a na-eji bioturbines emepụta biogas site na sistemụ microturbines nke arụnyere n'otu n'otu ka ha na-ewepụta ike ma njupụta ahụ na-aga na netwọk ọha na eze, nke dị n'obodo a bụ nkwado.
Na usoro a, ọkụ eletrik, gas na nri fatịlaịza niile sitere na nsị ezi.
Ọrụ ahụ dị mfe, ihe mkpofu ahịhịa ezì na-ewepụta na ọdọ mmiri ebe nje bacteria na-emebi ya, nke mere na ewepụtara biogas, wee ziga ya na obere osisi ka emechaa kesaa site na ọkpọkọ ma ọ bụ mepụta ọkụ eletrik microturbine.
Nkà na ụzụ a dị mfe, ọ nwere ike ịchịkwa ya site na ịntanetị ma ọ bụ satịlaịtị, ọ nwere arụmọrụ dị elu nke okpomọkụ, ọ na-enye ohere ịmekọrịta mmekọrịta na ọbụna ịmalite ịmalite iji otu ngwa ahụ.
Enwere ike iji ya na ụdị ụlọ niile na ụlọ ọrụ ugbo ma ọ bụ nke anụ ụlọ, ihe ga-agbanwe bụ mbido nke ihe ndị sitere n'okike.
Ojiji nke micro-turbines chụrụ na gas gasị bụ ihe ọzọ iji chee ụkọ na ọnụahịa dị elu nke ọkụ eletrik na-emetụta ụwa niile.
Enwere m olile anya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-eleba anya na sistemụ nke ihe omimi ebe ọ bụ na ọ bụ nnọọ oru oma, echekwa iji wụnye na-enye ndị magburu onwe akụ na ụba na gburugburu ebe obibi na-arụpụta.
Iji ike dị ọcha bụ nhọrọ enwere ike ịnweta dị ka enwere teknụzụ dị iche iche, akụrụngwa na usoro maka mkpa na mmefu ego ọ bụla.
Ojiji biogas kwesịrị ịnọgide na-eto eto gburugburu ụwa n'ihi na ọ bụ nnukwu isi iyi nke ọcha ume.
AHURTA: Biodiesel.com. ar
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » Biogas » Usoro biogas sitere na nsị ezi na Argentina
Ike Geothermal ekele maka ugwu mgbawa
Spain bụ otu n'ime mba ndị tụkwasara mmanụ obi